December | 2018 | HimiloNetwork
Himilo December 29, 2018	Leave a comment 299 Views
MUQDISHO (Himilonetwork) — The Ayaidah, oo ah qabiilka Bedouin ee dega waqooyi-bari dalka Masar waa kuwii ugu danbeeyey ee wali ku dhaqmaya Bisha’h oo ah hab-dhaqan hore oo lagu ogaado haddii eedeysanaha danbiga lagu soo oogay uu yahay danbiile ama dabilaawe. Waxay tani ku imaaneysa in qofku qaando kulul oo dabka laga soo qaaday uu ku hor leefo doqayda hortooda. Haddii carrabku uu ...
Himilo December 29, 2018	Leave a comment 229 Views
DHAKA (Himilonetwork) — Boqollaal kun oo Muslimiin ah ayaa ku kulma daanta webiga Turag ee duleedka caasimadda Bangladesh ee Dhakka – isku imaatin lagu tilmaamo midka labaad ee ugu weyn dunida kaddib Xajka oo la yiraahdo Bishwa Ijtema. Ijtema waxaa qudbado dheerdheer ka jeediya culumada dalka Bangladesh. Waxaana uu socdaa muddo saddex maalin oo xiriir ah. Balse si loo dhimo mugga tirada ...
Saleh oo rumeynaya riyada taageere Liverpool oo indhoole ah.
Himilo December 29, 2018	Leave a comment 233 Views
LONDON (Himilonetwork) — Xiddiga Muslimka ah, Mohammed Saleh ayaa rumeeyey riyada taageere 26-jir indhoole ah oo kooxdiisa Liverpool taageerayay taniyo carruurnimada – isaga oo ku marti-qaaday xerada tababbarka kooxda Anfield. “Qof walba wuxuu ii ahaa soo dhaweeye diirran,” ayuu yiri Mike Kearney isaga oo la hadlaya BBC Sport. Toddobaadkii hore, Kearney ayay qabatay shaashadda isaga oo u dabaal-degaya gool uu dhaliyay ...
Himilo December 29, 2018	Leave a comment 246 Views
LAHORE (Himilonetwork) — 100-kii sano ee lasoo dhaafay, qoyska reer Waheed Murad waxay ilaalinayaan kaniisad yar oo ku taalla xaafadooda – iyaga oo hubsada in gudaheeda sidoo kale ay noqoto mid had iyo jeer nadiif ah. Iyaga oo ku nool xaafad ka fog magaalada, waxay awoodeen inay dhowraariyaan jiritaanka kaniisadda oo ay ku dhex cibaadeystaan tira-yar oo xaafadda kula nool. Waheed ...
Denmark oo qaadashada Sharciga ku xiraysa in la is-gacan-qaado ‘salaamo’!
Himilo December 29, 2018	Leave a comment 235 Views
COPENHAGEN (Himilonetwork) — Tallaab loo arkay in lagu bartilmaameedsanayo tira-yarta Muslimiinta ah ee la nool, Denmark ayaa hindise-sharciyeed la xiriira in qofka qaadanaya sharciga dalka uu gacan-qaado ‘salaamo’ saraakiisha waaxda socdaalka. “Waxay kasoo horjeeda aragtida shaqsiga ah in qofka lagu qasbo inuu xiriir jireed la sameeyso qof kale,” ayuu yiri Thomas Andresen, oo ah maayarka magaalada Aabenraa. Hindisahan oo meeriskiisa la marin ...
Himilo December 19, 2018	Leave a comment 249 Views
MUQDISHO (Himilonetwork) — Haweeney Shiinees ah ayaa lagu soo warramayaa inay ka been sheegtay afduubka wiilkeeda 11-jirka ah si ay u tijaabiso haddii seygeedu uu la walwali doono iyo in kale! Hooyada wiilka oo 33-jir ah laguna magacaabo Chen ayaa booliska Yueqing u gudbisay warqad anbad ah oo ay ku sheegeyso in inankeedii uu Ka maqan yahay. Waxay u sheegtay in ...
Himilo December 19, 2018	Leave a comment 389 Views
LONDON (Himilonetwork) — Milkiilaha dukaan dharka lagu iibiyo oo ku yaalla London ayaa – si ay uga hortagto xatooyada – sameynaysa fal cajiib leh. Haweeneydan oo diiday in la magac-dhebo ayaa doonaysa xirfadlayaal tuuganimada xariif ku ah inay yimaadaan rugteeda kaddibna wax ka dhacaan. Dabadeed waxay u sheegayaan sidii ay ku dhaceen. Waxayna isku dayaysaa inay ka hortagto – iyada ...
Himilo December 19, 2018	Leave a comment 235 Views
MUQDISHO — 70-jir u dhashay dalka Scotland ayaa iska qasaariyay fasaxiisa xagaaga uu ku tagi lahaa Maraykanka kaddib markii – isaga oo buuxinaya foomka codsiga fiisaha – uu isku sheegay inuu yahay argagaxiso. John Stevenson iyo afadiisa Marion oo ku nool Inverclyde, dalka Scotland, waxay qorsheynayeen inay dhammaadkan sannadkan fasax ku tagaan New York ayaa ku hungoobay helidda fiisaha kaddib markii waaxda ...
Himilo December 19, 2018	Leave a comment 309 Views
MUQDISHO (Himilonetwork) – Edgardo “Perros” Zuniga wuxuu ku safray gebi ahaan dalka Mexico isaga oo samata-bixinaya eeyaha dayacan; iyo kuwa dhaawacan; una fidinaya daryeel iyo gabaad. Wuxuu ilaa hadda soo samata-bixiyay 400 oo ey shantii sano ee lasoo dhaafay. Sannadkii 2013-ka, markii uu samafalkan bilaabayay, waxaa ka go’neyd inuu soo badbaadiyo eeyaha dhiban iyo kuwa dayacan inta karaankiisa ah. Shantii sano ...
Himilo December 18, 2018	Leave a comment 327 Views
MUQDISHO (Himilonetwork) – Leonardo Nicanor Quinteros waa 12 jir wali ku jira wax-barashada dugsiga sare. Wuxuuna goor hore awooday inuu furto iskuulkiisa gaarka si uu carruurta kale iyo dadka waaweyn uga caawiyo tacliinta. Wuxuu jecel yahay wax-barashada iyo inuu la wadaago asaagiisa ka hooseeya. Kaddib markii uu u kuur-galay in carruur badan oo saaxiibadiis ah inaysan la qabsan wax-barashada iyo in ...